iExtract Plus, n'efu maka obere oge | Esi m mac
Kemgbe ọbịbịa nke ịntanetị, mmemme ndị na-enye anyị ohere ịpị ụdị faịlụ ọ bụla ha bụ ụzọ a na-emebu iji kesaa ozi na ịntanetị ma ọ bụ site n'ụdị anụ ahụ dị iche iche nke na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ugbu a enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ndị na-enye anyị ohere ịpịkọta na decompress faịlụ site na Mac anyị, ọtụtụ n'ime ndị a dakọtara na usoro ndị eji eji, ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile na-eme ya n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ na ọnụego mkpakọ kachasị dabara maka mkpa nke ọrụ. Taa, anyị na-ekwu maka iExtract Plus, ngwa nke na-enye anyị ohere iwepu ọdịnaya nke faịlụ abịakọrọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ọ bụla.
iExtract Plus nwere ọnụahịa mgbe niile nke euro 0,99, mana maka obere oge anyị nwere ike ibudata ya n'efu site na njikọ nke m na-ahapụ na njedebe nke isiokwu a. iExtract Plus abụghị naanị dakọtara na ọtụtụ mkpakọ ụdị, mana na-enyekwa anyị ohere iwepụta onyonyo site na faịlụ na PDF na usoro mgbasa ozi ejiri mepụta eserese na usoro Flash echekwara na ụdị SWF, yabụ ọ nwere ike ịbụ ezigbo ngwa maka ndị ọrụ ahụ niile rụọ ọrụ kwa ụbọchị na faịlụ ndị a formats.
Isi na-akwado formats, n'etiti ihe karịrị 25 na-akwado na-na- ZIP, RAR, 7z, Tar, Gzip na ndi ozo ya, Bzip2 na ndi ozo ya, cbz, cbr, LZH, ARJ, arco, cba, ite, cpio... ka kpọọ ụfọdụ n'ime ndị akacha eji. Ọrụ ahụ dị mfe ebe ọ bụ naanị na anyị ga-emepe ngwa ahụ ma dọrọ akwụkwọ niile anyị chọrọ ịmịpụ na windo iExtract Plus ka ọ malite ịrụ ọrụ. Enwere ike ime usoro mmebi ahụ na ogbe, ya mere ọ dị mma ma ọ bụrụ na anyị ga-ehichapụ ọtụtụ faịlụ mgbe ị na-ahapụ Mac na-arụ ọrụ iji mee ihe ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » iExtract Plus, n'efu maka obere oge
Weta mmetụ nke ọ joyụ na 2016 Macbook Pro ọhụrụ gị ma ọ bụ na-enweghị Touch Bar